भागीरथी प्रकरणमा दिनेशले फेरी बयान, मैले आफ्नै दिदीलाई कहाँ त्यस्तो गर्न सक्छु र ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/भागीरथी प्रकरणमा दिनेशले फेरी बयान, मैले आफ्नै दिदीलाई कहाँ त्यस्तो गर्न सक्छु र ?
बैतडीकी भागरथी भट्ट घटनाका अभियुक्त दिनेश भट्टले पछिल्लो समय बयान फेरेका छन् । भागिरथी घटनापछि दिनेशको परिवार बैतडीबाट महेन्द्रनगर गएको छ । अहिले दिनेशले भने आफ्नै दिदीमाथि त्यस्तो घटना गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
दिनेश भट्ट यतिबेला दिपायलस्थित सुधारगृहमा छन् । प्रहरीले उनैले ब ला त्का र पछि ह त्या गरेको अनुसन्धानका आधारमा र्पुपक्षका लागि अदालतको आदेशमा सुधारगृह राखेको हो । तर, सुधारगृहमा रहेका दिनेशले यसअघिको बयान फेरेका छन् ।
किशोर दिनेशले आफूले दिदी समानकी भागरथीमाथि यस्तो सोच्न पनि नसक्ने भन्दै आफन्तहरुलाई भनेका छन् । आफन्तसँगको सम्पर्कपछि उनले घटनामा संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् ।
भागरथी घटनामा अर्कै व्यक्ति संलग्न रहेको कतिपय स्थानीयको दाबी रहेको छ । घटनामा दोहडा केदार गाउँपालिकाको प्राविधिक कर्मचारीको संलग्नताको विषय उठेपछि भागरथी घटनाको अनुसन्धानबारे प्रश्नहरु तेर्साइएको छ । अभियुक्त दिनेशले उनको नाम भनेको बुझिएको छ ।
बाल सुधार गृहबाट फोन गरेर आफूले घटना नगरेको बताएको दिनेशका बुवा दिपकराज भट्टले दावी गरे । शनिबार उनी आफै दिपायल गएर छोरो भेटेर आएको थिए । दिनेशका बाबुका अनुसार एक जना वडा कार्यालयकै कर्मचारी भएको र अर्को व्यक्तिलाई नचिनेको समेत छोराले भनेको छन् ।
तर, नेपाल प्रहरीले भने बाहिर अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएका कुराहरुको कुनै अर्थ नरहेको जनाएको छ। परिवारको रोहबरमा बयान लिने क्रममा अभियुक्तले प्रहरी, सरकारी वकिल र जिल्ला अदालतमा समेत अ प रा ध स्वीकार गरेको र प्रमाणले समेत उनको संलग्नता पुष्टि गरिसकेको बताउँदै यी कुराको अर्थ नहुने जनाएको हो ।